"Waa Waajib In Uu Dhaliyo, Anagu Ma Aqbali Karayno..." - Joachim Low Oo Canaan Ku Googooyey Timo Werner Oo Khasaariyey Gool Madhan Xilli Dalkiisa La Garaacay - Laacib
HomeKulamada Caalamiga Ah“Waa Waajib In Uu Dhaliyo, Anagu Ma Aqbali Karayno…” – Joachim Low Oo Canaan Ku Googooyey Timo Werner Oo Khasaariyey Gool Madhan Xilli Dalkiisa La Garaacay
“Waa Waajib In Uu Dhaliyo, Anagu Ma Aqbali Karayno…” – Joachim Low Oo Canaan Ku Googooyey Timo Werner Oo Khasaariyey Gool Madhan Xilli Dalkiisa La Garaacay
April 1, 2021 Abdiwahab Ahmed Kulamada Caalamiga Ah, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Tababaraha xulka qaranka Germany ee Joachim Low ayaa canaan dusha uga tuuray weeraryahanka xulka qarankiisa ee Timo Werner, kaddib markii Jarmalku guul-darro 2-1 ah kala kulmay North Macedonia xalay fiidkii.
Goran Pandev ayaa Northe Macedona u dhaliyey gool waxaase ka daba keenay Ilkay Gundogan oo rikoodhe dhaliyey daqiiqaddii 63aad, laakiin dhamaadka ciyaarta oo ay toban daqiiqadood ka hadhsan tahay ayuu Gundogan goolka hortiisa kubbad bannaan ugu dhiibay Timo Werner oo si aan la garanayn kubadda u ag-mariyey goolka.
Qaladka uu sameeyey Werner ayaa lagu ciqaabay xulka qaranka Germany, waxaana daqiiqaddii 85aad laga dhaliyey goolka guul-darrada u keenay, kaas oo soo afjaray guul-darro la’aantii 35ka ciyaarood socotay ee xulka qaranka Germany ee kulamada isreeb-reebka Koobka Adduunka.
Xulka qaranka Germany ayay ugu dambaysay in laga badiyo isreeb-reebka Koobka Adduunka sannadkii 2001 markaas oo England ay ku garaacday 5-1, laakiin intii ka dambaysay ayay si joogto ah usoo guuleysanayeen amaba u barbarraynayeen.
Joachim Low oo ciyaarta kaddib wax laga weydiiyey goolka uu khasaariyey Timo Werner ayaa canaan dushan uga tuuray laacibkan, waxaanu yidhi: “Waa waajib in kubaddaas uu dhaliyo, su’aal na kama taagna. “Waa qasab in uu muujiyo, in halkan goolal ka dhalin karayo.
“Laakiin kubadda sidii saxda ahayd uguma laadin lugta bidix, haddii uu si sax ah u taaban lahaa kubadda waxay noqon lahayd gool.”
Kaddib hadalkan canaanta ah, Ilkay Gundogan ayaa niyad-samaan u muujiyey Timo Werner, waxaana uu yidhi: “Waan ka xumahay Timo. Isagu waxa uu doonayaa inuu dhaliyo goolasha ugu badan.
“Ma lihin dookh kale oo aan ahayn in aanu sii wadno. Dhamaantayo waanu ognahay in guul-darro noocan oo kale ah aanay ahayn in ay nagu dhacdo, sidani sax maaha, mana sharrixi karayno sidii ay wax u dhaceen. Laakiin haddana waa sidii ay wax ahaayeen, waana in aanu aqbalno.”